लक डाउनमा खानेपानी वितरण कस्तो होला? निजी कम्पनी घरघरमा बोतल र जार पुर्‍याउन तया - लण्डन काठमाडौँ
लक डाउनमा खानेपानी वितरण कस्तो होला? निजी कम्पनी घरघरमा बोतल र जार पुर्‍याउन तया
काठमाडौं। कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले देश नै लक डाउन गरेको छ। अत्यावश्यक बाहेक बाहिर निस्किएमा कारवाही गर्नेगरि सुरक्षा निकायलाई समेत परिचालन गरेको छ।
लक डाउनपछि काठमाडौं उपत्यकाका बासिन्दाको त्रास भने खानेपानीको अभावसँग जोडिएको छ। लक डाउनअघि ग्यासको जोहो गर्न दौडिएका उपभोक्ताका लागि खानेपानी वितरण जटिल हुने त्रासले सताएको छ। सरकारले पिउने पानीको वितरण प्रभावकारी बनाउन नसक्दा उपभोक्ता त्रसित बनेका हुन्।
उपत्यकाका धेरै स्थानमा अहिले पनि खानेपानी संस्थानले पानी वितरण गर्न सकेको छैन। ती स्थानमा इनार र बोरिङ लगायतका पानीसमेत छैन। ती स्थानका बासिन्दाले कसरी पिउने पानीको जोहो गर्लान् ?
लक डाउन गरे पनि विहानैदेखि नियमित जस्तै गरि खानेपानी घरघरमा पुर्‍याएको नेपाल बोतल वाटर उत्पादक संघले जनाएको छ।
माग भएअनुसार निरन्तर पानी पठाइरहेको संघका अध्यक्ष सुवास भण्डारीले बताए। यो सेवा लक डाउन अवधिभर निरन्तर हुने उनले दाबी गरे। ‘पसल र स्टोरहरु बन्द भएको अवस्था छ। हामीले घर घरमै जार र अस्पतालहरुमा बोतलको पानी मागअनुसार विहानैदेखि पुर्‍याइरहेका छौ,’ उनले भने, ‘कुनै ठाउँमा माग आए त्यहाँ पानी पुर्‍याउन तयार अवस्था छौ।’ महासंघले सबै पानी उद्योगलाई पुर्ण रूपमा बन्द नगर्न सर्कुलर जारी गरेको छ।
उपत्यकामा २ सय २५ वटा उद्योग संचालनमा छ। एउटै उद्योगमा जार र बोतल दुवै उत्पादन हुन्छ। सबै खुल्ला छ। उपत्यकामा दैनिक डेढ लाख २० लिटरका जार खपत हुन्छ भने २५ हजार कार्टुन एक लिटरका बोतलको पानी खपत हुने गर्छ।‍ जार र बोतल गरि करिब ५० लाख लिटर पानी खपत हुने गरेको महासंघले जनाएको छ।
उपत्यकाबाट ३० प्रतिशत मानिस बाहिरिएका छन्। त्यही कारण पानी वितरण गर्न सहज हुने उनले अपेक्षा गरे। महासंघले चाल्नाखेल क्षेत्रमा सुदीप बस्नेतलाई ९८५१२४६५५१, ललितपुर क्षेत्रमा राम बराल ९८४१८८९८६५, जोरपाटी क्षेत्रमा श्रीकुमार श्रेष्ठ ९८५१०२९१५९, गो‌ंगबुमा ध्रुव गौतम ९८५१०२९६४९, बुढानिलकण्ठमा धर्म ९८५११५२४२२ र भक्तपुरमा राम सुवाल ९८५१००८६३४ लाई फोन गरेर पानी मगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ।
मास्क र स्यानिटाइजर नपाउँदा समस्या
मास्क र स्यानिटाइजर नपाउँदा पानी वितरणका लागि समस्या भएको भण्डारीले बताए। ‘मास्क र स्यानिटाइजर प्रयोग गरेरै हामीले बजारसम्म पानी पुर्‍याउँछौ,’ उनले भने, ‘स्यानिटाइजर र मास्क बजारमा पाएका छैनौ।’
महासंघले स्थानीय तहसँग समेत मास्क र स्यानिटाइजर मागेको थियो। स्थानीय तहले किनेर बिल पेश गर्न आग्रह गरेका थिए।
महासंघका अनुसार उद्योगका कामदार घर फर्किन थालेपछि केही समस्या भने भएको छ। ‘मान्छे नभएपछि बजारमा पुर्‍याउन केही समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘उद्योगमा एक जनाले काम गर्न सक्छन्। हामीले कठिन परिस्थितिमा समेत बजारसम्म पानी पुर्‍याउन तयार छौं।’